Moto wemasango uchawedzera mumakore anouya | Network Meteorology
Moto wemasango uchawedzera mumakore anotevera
Zvinosuwisa kwazvo kuona kuti, mumaminitsi mashoma, chii chakatora makore, kazhinji mazana emakore, kukura kuita madota. Moto wesango chimwe chikamu cheimwe nharaunda. Muchokwadi, kune zvirimwa zvakawanda zvinongogona kumera mushure mechiitiko chakadai, senge cheiyo geni Protea iyo inogara muAfrica. Zvisinei, kazhinji yenguva dzinokonzerwa nevanhu, uyezve zvakare neshanduko yemamiriro ekunze.
Remangwana remasango rinounzwa "dema", uye hazvina kutombotaurwa zvirinani: kudzikiswa kwemvura uye kuwedzera kwekusanaya kuchaita kuti mbesa dzishaye simba nekukurumidza, izvo panguva canicular nguva moto uchave iwo protagonists wezuva redu nhasi.
Moto ndewe, wemhuka (kusanganisira vanhu), dambudziko rakakomba kwazvo. Kutyisidzira kwavasingade kuva nako. Moto unotsvaira zvese zviri munzira yawo, uchiparadza pekugara chemazana ezvisikwa uye nekuisa hupenyu hwevanhu panjodzi iri munzvimbo. Kunyangwe zvese, nhasi, isu tiri kure nekutora huwandu hwemoto kudzikira.
Iyo yepasirese yepakati tembiricha iri kuwedzera. Zvinhu zvipenyu zvinofanirwa kuchinjika, asi hazvizozviita nekukurumidza. Kugadziriswa kunogona kutora mwedzi uye kunyange makore, uye ndiyo nguva yavanogona kunge vasina.
Naizvozvo, musayendisiti José Antonio Vega Hidalgo, akabatana neSpanish Society of Environmental Sayenzi uye neForest Research Center yeLourizán, akadaro , que Izvo zvakakosha kubheja pane dzidzo, kuwedzera kusvinura uye kunyanya kurambwa munharaunda sechinhu chakakosha kuita. Saizvozvowo, akawedzera kuti mamiriro ehuswa hunotsva anofanirwa kuvandudzwa kuburikidza nemusanganiswa wemiti yemhando uye kuremerwa kwemarudzi epirophilic, kusiyaniswa kwekushandisa kwesango uye kudyara kukuru mukutsvaga.
Zvichida ndiyo nzira iyo masango aigona kuponeswa nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Network Meteorology » Kufungidzira » Moto wemasango uchawedzera mumakore anotevera
Imbwa dzebhuruu dzinoonekwa muIndia nekuda kwekusvibiswa
"Chimwe Chinhu Kunze Ikoko" Yakakurudzira Kuverenga pane Climate Change